आमिरको १,००० करोडको ड्रीम प्रोजेक्ट "महाभारत" रोकियो, यस्तो छ कारण!
आमिरको १,००० करोडको ड्रीम प्रोजेक्ट “महाभारत” रोकियो, यस्तो छ कारण!
एजेन्सी, बलिउडका चर्चित अभिनेता आमिर खान पछिल्लो समय आफ्नो चलचित्र ठग्स अफ हिन्दुस्तानमा व्यस्त रहेका छन् । यसको अलावा उनी आफ्नो बाकी चलचित्रहरुमा पनि ध्यान दिईरहेका छन् । पछिल्लो केही दिनदेखी खबर आएको थियो कि आमिर महाभारतमा आधारित चलचित्र बनाउने भएका छन्। आमिर खान आफ्नो ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारतबाट काम शुरु गर्ने छन् । यस चलचित्रलाई आमिरले नै निर्माण गर्नेछन् । यसको साथै महाभारत चलचित्रको कैयौ फ़्रेन्चाइज बनाइने बताईएको छ । खबर अनुसार महाभारतलाई ५ भागमा बनाइने छ । यो निकै ठुलो बजेटको प्रोजेक्ट हुनेछ । चलचित्रको बजेट १००० करोड बताईएको छ भने यसलाई मुकेश अम्बानीले प्रोड्यूस गर्ने पनि खबर थियो । तर अब यससँग जोडिएको नयाँ खबर अगाडि आएको छ । सूचना अनुसार अब आमिरले यो चलचित्र नबनाउने भएका छन् ।
एक लिडिंग रिपोर्टको अनुसार आफ्नो ड्रीम प्रोजेक्टलाई शुरु गर्ने या नगर्ने बारे आमिर अब अन्योलमा परेका छन् । रिपोर्टमा भनिएको छ कि कुनैपनि इतिहास या पौराणिक कथामा बन्ने चलचित्र कुनै पहाड भन्दा कम हुदैन । पछिल्लो साताअघि चलचित्र “पद्मावत” लाई लिएर भएको विरोधलाई मध्यनजर गर्दै आमिर एक पटक आफ्नो ड्रीम प्रोजेक्ट शुरु गर्नु अघि सोच्न बाध्य भएका छन् । यो प्रोजेक्ट अघि आमिर ठग्स अफ हिन्दुस्तानमा अमिताभ बच्चन, कट्रिना कैफ र फातिमा सना शेखको साथ छिट्टै चलचित्रमा देखिदै छन् ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत २७, २०७४१७:४८
‘स्टूडेन्ट अफ द ईयर 2’ को सुटिङ सुरु भए लगत्तै रिलिज डेटको पनि घोषणा!
नेपाल आइडलका गोल्डेन माइक होल्डर बाहिरिदा देखियो यस्तो भावुक दृश्य (भिडियो)
आखिर किन यी चर्चित अभिनेत्री बीच सडकमा अर्धनग्न भइन्? भयो यस्तो खुलासा!
ब्ल्याक बिकिनीमा बोल्ड मिनिषाले मच्चाईन सनसनी, हेर्नुहोस तस्विर!
यति महँगो टप र जुत्ता लगाउँछिन् करीना कपूर, मूल्य जान्नु भएमा आश्चर्यचकित पर्नुहुनेछ
बलिउडका यि कलाकारहरुसँग विदेशमा पनि छ करोडौ पर्ने शानदार घर!
भारतीय सिनेमाघरहरुमा छायो सन्नाटा, अब यस फिल्मबाट हुनेछ धमाका